Chad Crowe Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Chad Crowe
Chad Crowe akabatana Techwood Kubvunza muna 2016 sechikamu chekubatanidzwa. Parizvino, anotarisira kuita kweTechwood uye mashandiro eakaunzi account. Ane bachelor degree kubva kuReinhardt University uye Master's Degree kubva kuTroy University in Communications. Kwemakore, Chad yakwanisa kudarika $ 25 miriyoni emadhora mukushambadzira kwekubhadhara kwakabhadharwa.
Techwood Consulting yakavambwa mu2008 uye ndeye yakasarudzika dhijitari kubvunza iyo ine hunyanzvi hwekugona mune organic uye yakabhadharwa kutsvaga. Inhengo yeInc5000 ye2017, inotungamirwa muAtlanta, GA, ine timu ye17 inotsigira 60 vatengi, Techwood ine mukurumbira wekuitwa kwemhando yepamusoro mukati meSEO nePPC nyaya dzenyaya.
Chipiri, Gunyana 19, 2017 Chipiri, Gunyana 19, 2017 Chad Crowe
Google inofanana neshanduko. Saka zvinogona kunge zvisina kushamisika kuti musi waAugust 29th, kambani yakaburitsa imwe shanduko kumaseteni avo ekushambadzira epamhepo, kunyanya nekutenderera kwekushambadzira. Mubvunzo chaiwo ndewokuti - shanduko nyowani iyi inorevei kwauri, bhajeti rako rekushambadza uye mashandiro ako kushambadza? Google haisi imwe yekupa plethora yemashoko pavanoita shanduko dzakadai, zvichisiya makambani mazhinji achinzwa murima kuti sei